"Anigu Waan Ku Faraxsanaan Karaa Hadii Aynu Dib Ugu Bilaabayno, Qof Kastaba Waxaa Waajib Ku Ah Inuu Wakhtigan Aad U Taxadaro" Michel D’Hooghe. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
"Anigu Waan Ku Faraxsanaan Karaa Hadii Aynu Dib Ugu Bilaabayno, Qof Kastaba Waxaa Waajib Ku Ah Inuu Wakhtigan Aad u Taxadaro" Michel D’Hooghe.
Xaalada kubbada cagta Yurub ayaa ku jirto xili jaho wareer ah iyada oo ay iska hor imanayaan rabitaankii kooxaha kubbada cagta iyo dawladaha waxaana soo baxaya warar badan oo walaac ku abuuraya horyaaladii laysku diyaarinayay in dib loo bilaabo.
Madaxa caafimaadka xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA oo magiciisa la yidhaa Michel D’Hooghe ayaa warbaahinta mariyay hadal naxdin wayn ku noqday kooxihii horyaalada waa wayn ee Yurub ee isku diyaarinayay in dib loo bilaabo kulamadii baaqiga ahaa.
Waxaa hore loo ogaa in gabi ahaanba la kansalay horyaalaa Holland iyo Belgium waxaana warka ugu wayn ee saacadihii ugu danbeeyay ee ciyaaraha ah in ra’sal wasaaraha dalka France ee Edouard Philippe uu sii rasmi ah ugu dhawaaqay in aan wax kulamo ah la ciyaari doonin ilaa bisha September.
Edouard Philippe ayaa shaaciyay in xili ciyaareedkii horyaalka heerka kowaad ee France iyo heerka labaad ay soo dhamaadeen isla markaana ayna jiri doonin kulamo xataa lagu ciyaari doono garoomo madhan taas oo xili ciyaareedkii League 1 ka dhigtay mid soo dhamaaday.
Laakiin waxaa warka ra’isal wasaaraha France ee Edouard Philippe raacay hadal wayn oo uu sheegay madaxa caafimaadka UEFA ee Michel D’Hooghe kaas oo go’aanka horyaalka France lagu kansalay taageeray isla markaana ku dooday in waxa laga hadlayaa uu yahay nolol iyo geeri balse ayna ahayn kubbada cagta laga hadlo.
Madaxa caafimaadka UEFA ee Michel D’Hooghe ayaa yidhi: “Dhamaanteen waxaynu u taaganahay go’aamo ee heerarka qaran ee dawladaha Waa wax aad u sahlan Si deg deg ah ayay kubbada cagtu u noqotay wax aan ugu muhiimsanayn ee nolosha”.
Madaxa caafimaadka UEFA ee Michel D’Hooghe oo ka hadlaya in xili ciyaareedkan intii baaqiga ka ahayd gabi ahaanba meesha laga saaro ayaa yidhi: “Anigu waan ku faraxsanaan karaa haddii aynu dib ugu bilaabanayo qaabka ugu haboon ee xili ciyaareedka soo socda oo aynaan waxba samayn ka hor inta uu xili ciyaareedka soo socdaa bilaabanayo.
Michel D’Hooghe oo hadalkiisa sii adkaynaya ayaa yidhi: “Haddii aynu xili ciyaareedka 2020/2021 bilaabi karno dhamaadka August ama bilawga September waan faraxsanaan doonaa Kadib waxaynu ka dheeraan karnaa weerar labaad oo ka yimaada fayraska taas oo aan wax aan suurtogal ahayn”.
Michel D’Hooghe oo niyadjabinaya kooxihii tababarka ku soo laabtay iyo kuwa dhawaan soo laabanaya ayaa yidhi: “Qof kastaba waxaa waajib ku ah in uu waqtigan aad u taxadaro, waxaan maqlay in wadamo badani ay ka fikirayaan in ay markale ciyaaraan kubbada cagta iyada oo taageera la’aan ah ama ay taageerayaal joogaan”.
“Waayahaygii shaqo ee dheeraa xaalado badan ayaan soo arkay halkaas oo ay isku miisaanmeen dhaqaalaha iyo caafimaadku. Inta badan dhaqaalaha ayaa guulaysta haddii ay taasi tahy maskax fikirka kubbada cagta ee xaaladaha aadka ugu xub dad waynaha xaaladahooda”.
Michel D’Hooghe oo go’aankiisa dhiibanaya ayaa yidhi: ‘Haddii ay jirto duruuf halkaas oo ay dooda caafimaad tahay in ay ka guulaysato dooda dhaqaalaha waa hadda, ma aha sabab lacageed, waa sabab nolol iyo geeri ah. aad ayay u sahlan tahay”.
Inkasta oo madaxa caafimaadka UEFA ee Michel D’Hooghe uu walaac xoogan ku abuurayo horyaaladii dib u bilaamayay, haddana wali dalka Germany waxaa ka socda diyaar garowga in xili ciyaareedka Bundesliga la bilaabo May 9 halka Serie A ay isku diyaarinayaan June 2 in horyaalka dib loo bilaabo.
Dhinaca horyaalka Premeir League waxaa tababarka ku soo laabtay kooxo ay ka mid yihiin Arsenal, Tottenham, West Ham waxaana la filayaa in dhawaan ay kooxaha oo dhami soo laaban doonaan iyaga oo jimcaha yeelan doona shir wax lagu go’aamin doono.